IMIPHEZULU YEETAFILE ZEWARTZ EMNYAMA (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Imiphezulu yeetafile zewartz emnyama (iingcamango zoyilo)
Imiphezulu yeetafile ze-quartz ezimnyama zizinto ezinobunkunkqele, ezingaphelelwa lixesha kuyilo lwakho lwekhitshi.
Ikhitshi lakho yintliziyo yekhaya, kwaye ukufumana isisombululo se-countertop esomeleleyo, ukugcinwa okuphantsi, kulula ukucoceka kwaye kujongeka kumangalisa kunokuba ngumceli mngeni. Itafile ye-quartz emnyama ikhathaza konke oku ngasentla, nangaphezulu. Makhe sijonge ukuba yintoni eyenza olu phawu loyilo lube lunqweneleka, kwaye uluhlu lwezinto ezizodwa ezigqityiweyo ziyafumaneka.
IQuartz lilitye elenziwe ngobunjineli, oko kuthetha ukuba ngokungafaniyo nelinye ilitye lendalo liqukethe izinto ezahlukeneyo ezahlukeneyo kubandakanya ilitye lendalo, igranite kunye nemabhile. Yahluke ngokupheleleyo. Ikwayenye yezona zinto zinzima zendalo phaya. Ilitye linobushushu kwaye liyanyamezela ukufuma, alizukukrwela, linxibe nzima kwaye alidingi kuhoywa kakhulu ukuze ligcine libukeka lihle. Isisombululo esilula sesepha kunye namanzi ashushu kuko konke okufunekayo ukucoca.
Imigca emnyama, yexesha langoku emnyama Imiphezulu yeetafile zekartz yinike ukuziva okungapheliyo. Ungayichazanga eyomnyama. Isimanje, isithunzi somthunzi esiya kuhlala sikhangeleka simangalisa. Ngoku ngenxa yesuntswana elinomdla njengoko singena kokumbalwa kokugqityiweyo kwetheyibhile emnyama ye-quartz.
Imiphezulu yeetafile zeMatte Black Quartz
Imiphezulu yeetafile zwi Glossy
Imiphezulu yeetafile zewartz ezimnyama kunye ezimhlophe
Imiphezulu yeetafile zeQuartz eziMnyama nezeGolide
Imiphezulu yeetafile zwii-Sparkle Quartz
Imiphezulu yeetafile zewartz ezimnyama
Imiphezulu yeetafile yesikhumba esimnyama
Iindleko zemiphezulu yeetafile zeQuartz ezimnyama
iingoma ezimnandi zokudanisa emtshatweni
Ikwabizwa ngokuba yi-'honed 'quartz, ukugqitywa kwe-matte kule ndlela ye-countertop kuswele ukukhanya kwe-glossier yayo. I-quartz iphantsi komhlaba ukuze yenze umphezulu ogudileyo, ongaguquguqukiyo kunye nembonakalo encinci. Ukufezekisa ukuba ujonge ukwenza indawo epholileyo kwaye intofontofo apho ukukhanya kungakhanyi kuyo yonke imiphezulu.
Ukwenza ukugqitywa kwe-matte, ipolishi yendalo efunyenwe kwi-quartz iyasuswa, ikhokelela kwilitye elikhangeleka likhanya, kodwa libe lisabukeka ngendlela yalo yoqobo ngaphandle kokuqaqamba okungaphezulu! Ukugqitywa kwe-matte kufanelekile ukufihla nayiphi na iminwe yeminwe kunye ne-smudges.
Ikhitshi lale mihla elinesiqithi se-matte esimnyama se-quartz
Olu khetho lwe 'glossier' luyaqhubeka ukuthandwa kakhulu, kwaye akukho nzima ukubona ukuba kutheni. Eyona nto iphambili kolu khetho lokugqibela kukukhanya okubonisa iipropathi, okwenza ikhitshi liziva likhazimla kwaye libanzi. Ukuba sele uziva ukhathazekile malunga nenqanaba lokuqaqamba - ungoyiki. Ukugqitywa kuza kumanqanaba aliqela 'acwebezelayo' asusela kwi-0-100%, kunye nokukhetha ngaphezulu kwesikali esifana nesipili. Kufanelekile ukwazi njengoko ucinga ngokhetho lwakho. Njengokhetho lwe-matte, olu gqibelo nalo luluhle ekufihleni ezo smears zekhitshi ezingenakuphepheka.
Ikhitshi elincinci elinee-countertops ze-quartz ezimnyama
yintoni isikhumbuzo somtshato sama-25
Umnyama nomhlophe njengombala odityanisiweyo uya kuhlala uyiklasikhi. Ukubetha ngaphakathi ngaphakathi ekhitshini kwee-80s, le combo yombala iseyindlela yanamhlanje.
Ngelixa ukusetyenziswa kwe-quartz kwakungathandwa kangako ngeminyaka yama-80, abayili baye ngobuchule balifaka eli litye ecaleni kwesikimu sombala omnyama nomhlophe kwiikhitshi zenkulungwane yama-21. Kwaye kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kuxhomekeke kubungakanani bombala ngamnye obonisiweyo. Ngokujongeka kufana negranite, itafile yequartz emnyama nomhlophe inokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zoyilo. Funda ngakumbi malunga zwi vs lenyengane Apha.
Ngaba isitopu sakho sokuphupha siqukethe umbala omnyama kunye nomhlophe, kunye nemibala emibini imelwe ngokulinganayo?
Mhlawumbi ukhuthazwe sisiqithi sekhitshi sangoku - bonke abamnyama, ngesitrayiti sombane esimhlophe esibaleka ngaso, okanye isiqithi esimhlophe - ngesithsaba esimnyama esihamba ngaso? Izinketho ze-quartz ezimnyama ezimhlophe nezimhlophe ziya kufaneleka ukujonga kuzo.
Esi siqithi sasekhitshini sijongeka simangalisa nge-quartz yaso emnyama enentambo emhlophe eneentambo
Ukuba ufuna ikhitshi yakho ibe nesibindi, ke olu lukhetho lwakho. Umnyama kunye negolide njengombala odibeneyo ulula, upholile. Iyafana nomnyama kunye itheyibhile emhlophe zwi ukhetho, umyinge omnyama kunye negolide yeyona nto iya kwenza umahluko phakathi kwesitetitop sokubala, okanye esifihlakeleyo. Nokuba unganesibindi esingakanani segolide, olu khetho luguquguqukayo, luyinkqubela phambili oluza kuqala incoko.
Ngokumenyezelwa okuncinci okubonisiweyo okanye 'ukubengezela' okubonisiweyo kuyilo, i-countertop ekhazimlayo iyamangalisa amehlo, kwaye inokubonakala ingakholeki. Abanye abathengi baye babhekisa kwimikhwa njengeeprisimusi ezincinci, ezithi xa zibethwe kukukhanya zibonise imibala yomnyama. Ukuba ingcinga yokubengezela ikwenza ubuyele umva, iintlantsi ngokwazo ngokubanzi azikho zikhulu kakhulu ngobukhulu, kwaye ziyanceda ukongeza umlinganiso ongezelelweyo kwisiphelo esimnyama sethafa.
iingoma koonyana koomama
Ukuba i-countertop ye-quartz ekhanyayo ayiyiyo yakho, ngoko i-quartz emnyama ye-quartz ngokuqinisekileyo ayiyi kuba. Asisathethi iintlantsi apha kodwa amanqanaba e-milky-twinkle!
Nabani na ongaphikisani nolu hlobo lokujonga, kukho into enomlingo malunga nokugqitywa. Ifaka imvelaphi emnyama emnyama, enamabala amnandi egolide, thetha i-pun kodwa olu khetho luza kukuthatha lukuthabathe kwindawo ye-intergalactic.
Itafile ye-quartz yesikhumba iye yanda kakhulu kwiminyaka yakutshanje, kwaye ukubonakala kwayo kwe-rustic kudlale indima enkulu koku. Inkangeleko efihliweyo, exhaphake kakhulu kwi-quartz emnyama ibalaselisa ubume obahlukileyo kunye nemibala yelitye lokoqobo.
Esi siphelo esahlukileyo sibangelwa yinkqubo yokurhabaxa eyenza ukuvela kwe-velvet ye-matte kunye nokukhanya, okuthelekiswa nolusu. Endaweni yokuba kugqitywe glossier njengoko kuchaziwe ngaphambili, i-quartz yesikhumba yimbonakalo yematte. Ukugcinwa okuphezulu kancinci kunezinye iindlela, oku kugqiba kuya kufuna ukucoca imihla ngemihla ngelaphu le-fiber encinci kunye nearhente yokucoca.
Ukuba ucinga ukufaka ikhawuntari emnyama ye-quartz emnyama, ngokuqinisekileyo kukho iindlela ezahlukeneyo onokuzijonga xa kufikwa kwisiphelo osifunayo. Kubalulekile ukuba uqwalasele uyilo lwekhitshi, ukukhanya kunye nezinto ozikhethayo kwisitetimenti sangaphakathi. Kungakhathaliseki ukuba uthatha isigqibo, i-quartz yinto ephathekayo ephathekayo, kunye nelitye elihle elisebenza ngokukodwa njenge-countertop.
umlambo owonqenayo emva kwendlu
Xa ukhangela iikowuti ze-countertop yakho entsha emangalisayo, qiniseka ukuba ucacisa ukuba yintoni le ifakiwe kwixabiso. Ezinye iinkampani ziyasilela ukukhankanya iindleko: ukujoyina umthungo, ukusika izixhobo, ukusika isinki njlnjl. Zonke ezi zinto kufuneka zibe yinxalenye yeendleko zokufaka - kodwa hayi rhoqo! Ukuthatha i-ballpark figure, ixabiso le-quartz ukusuka kwi- $ 50- $ 100 ngonyawo wesikwere kubandakanya ukufakwa.
Ukufumana ezinye izimvo jonga igalari yethu ye iintlobo zemiphezulu yeetafile ekhitshini .
ithayile yegumbi lekhitshi
lithetha ukuthini ngokusemthethweni?
Uyilo lwepatio ebiyelweyo
iilokhwe zeendwendwe zomtshato zasebusika
Yimalini kwisipho somtshato
iipali izakhiwo iiplani zendlu
yimalini ekufuneka isibini sichithe kwisipho somtshato